Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? 100% xariijimaha xariirada xabashida saafiga ah waxay ka dhigtaa dhammaan noocyada timaha inay noqdaan kuwo caafimaad qaba oo la maarayn karo iyada oo la dhimayo khilaafyada u horseeda jahawareer, jebin iyo lumis timo. Aad bay ugu talinayaan stylists timaha curdan. Waxay ka caawisaa inay timaha caafimaad qabaan iyadoo hoos u dhigaysa jiidista iyo jiidista timaha. Xariirta jilicsan waxay caawisaa inay timuhu dul maraan dabada xariirta, iyadoo yaraynaysa jebinta waxayna yaraynaysaa laalaabkii timaha. Xidhiidhka timaha xariirta ayaa xoogaa raaxo iyo soo jiidasho leh ku soo kordhiya hawl maalmeedka daryeelka timaha. Oeko-Te...
Waa maxay sababta aad u dooranayso madaxa xariirta? Walxaha tayada sare leh: Xariirkan scrunchie waxa uu ka samaysan yahay 100% xariir xabag ah. Silk scrunchie oo la xoojiyay: sirta quruxda timaha caanka ah waa mulberry silk scrunchies, kuwaas oo jilicsan oo jilicsan oo aan waxyeello u geysan timaha. Faa'iidooyinka: xoqitaanka xariirta ayaa ah kuwa ugu fiican ee lagu daro meelaha lagu qurxiyo. Xarig-xariireedka tayada sare leh waxaa loogu talagalay inuu si habsami leh uga baxo timahaaga adoon jiidin, nabar ama timo jebin inta aad joogtid. Laastikada ku habboon: ballaca abo...
Xariir weyn oo mulberry leh oo gaar ah ayaa timaha xoqaya 100% xariir saafi ah
Waa maxay sababta aad u dooranayso SILK BONNET? Waxyaabo wanaagsan: Satin scrunchies waxay ka samaysan yihiin walxo xariir ah, taas oo tayo sare leh, dhalaalaysa oo jilicsan. Satin scrunchie ma dhaawici doonto timahaaga, xitaa haddii aad xidhato habeenkii oo dhan, timahaagu waxay ahaan karaan kuwo jilicsan. Haddi aad u siiso hadiyad kirismaska ​​dumarka, dhalinyarada, da' kasta ama xaalad kasta, maaha doorasho xun. Waxayna u noqon doontaa hadiyad Christmas ah oo xusuus mudan iyada. Dhacdooyinka: kuwan timaha xariirta ah scrunchies waxay leeyihiin 50 midab oo kala duwan, midab kastaa wuxuu u eg yahay xargo...
123456 Xiga > >> Bogga 1/16